Na-ere N'Onlinentanet: etechọpụta Ihe Prozụta Ihe schọta Ihe Maka |zụ Ihe | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 8, 2017 Sunday, Jenụwarị 8, 2017 Frank Bria
Otu n'ime ajụjụ m na-anụkarị bụ: Kedu ka ị si mara ozi ị ga-eji maka ibe ọdịda ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi? Ọ bụ ajụjụ ziri ezi. Ozi na-ezighi ezi ga-emeri nhazi dị mma, ọwa kwesịrị ekwesị, na ọbụlagodi nnukwu ego.
Azịza ya bụ, n'ezie, ọ dabere n'ebe olile anya gị dị na usoro ịzụ ahịa. Enwere usoro 4 dị mkpa na mkpebi ịzụta ọ bụla. Kedu ka ị ga - esi mara ebe atụmanya gị dị? Ikwesiri ichọpụta nke ha ịzụ triggers.
Iji banye n'ime ndị na-azụta ihe, ka anyị jiri ihe atụ anyị niile nwere ike ịkọ: ịzụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa.
Mụta maka Trzụta Ihe Na-akpata Mall
Ahụmahụ ịzụ ahịa kachasị mma dị na nnukwu ụlọ ahịa. Ha dị nnọọ mma n’ịgbanwe gị site na onye na-awagharị, onye mkpụrụ obi furu efu nye onye ahịa. Ya mere, ka anyị lelee otu ha si emekọrịta gị ma mụta nkuzi ole na ole gbasara ịmata ihe na-akpata ịzụ.
Chee echiche na ị hụrụ ụlọ ahịa ị na-adịbeghị, ma chere n'èzí mgbe ị na-ele ya. Ma eleghị anya, ị nọ n'ime nnukwu ụlọ ahịa na-elele ihe ịrịba ama ahụ na-anwa ịchọpụta ndị ha bụ na ihe ha na-eme. Tupu ị họrọ ịmekọrịta ụdị azụmahịa ahụ, ị ​​bụ isi na-agbagharị.
Ọ bụ okwu siri ike, mana ọ dị mma ịkọwa akụkụ mbụ nke mmekọrịta ọ bụla. Okwu a metụtara ndị na-abịa na weebụsaịtị gị wee pụta ozugbo; A na-eji okwu ahụ 'ọnụego nla elu' kọwaa nke a. Ndị a bụ Loiterers, ọbụnadị atụmanya n'ezie na ọkwa a. Ha bụ ndị na-abịa ụdị ịchụso, n'ihi ya, anyị na-amalite ndị ahịa na-eto eto n'akụkụ a.
Etu ị ga - esi soro onye mbịarambịa: “Mụtakwuo”
Ihe mbụ ịkpọ oku iji rụọ ọrụ na atụmatụ ahịa ọ bụla ọbụlagodi atụmanya kachasị iru eru bụ mụtakwuo. Ezubere ọkpụkpọ oku a ka ọ bụrụ ọkwa kachasị dị ala nke ị nwere ike ịrịọ maka atụmanya - wepụta oge iji chọpụta ihe.
The mụtakwuo ịkpọ oku ime ihe bụkwa otu n'ime usoro ịntanetị a na-ejikarị eme ihe iji nweta atụmanya ịnye ozi. Niile nke ọdịnaya ahịa bụ nnoo a mụtakwuo atụmatụ. Onyinye a na-enye n'efu nke na - akuzi olile anya gi ihe ha amaghi na mbu bu mụtakwuo kpọọ-edinam.
ndị a mụtakwuo Enwere ike ịkpọ ahịrị-ime metụtara ihe ahụ ị na-akuzi. Ọmụmaatụ, Ebe nrụọrụ weebụ CrazyEgg kwuru Gosi M Igwe Okpomọkụ M nke bụ ịkụziri atụmanya ha ihe ọhụrụ ha na-amabughị.
Buyingzụta ihe na-akpalite ị na-achọ bụ onye na-aza gị mụtakwuo kpọọ-edinam. Ha na-eweli aka ha elu ma nye gị ikike ịga n’ihu n’ahịa ha.
Buru n'uche na atụmanya gị na-aza n'ihi na ha chọrọ ịmụ ihe n'ezie - yabụ ezorola ahịa ahịa n'azụ a mụtakwuo kpọọ-edinam. Y’oburu n’iche na olile anya gi di njikere izu, nye ha a zụta ugbu a ma ọ bụ a dozie ya -ekwu-na-edinam na ihe ndị ọzọ na akara na ha na-atụ anya.
Ihe omumu: I choro ihe doro anya na obi ike ịkọwa ihe ị bụ a Loiterer.
Laghachi azụ ahịa
Ka anyị were ya na ihe banyere ụlọ ahịa ahụ dọtara mmasị gị. Nke a bụ ebe ị banyere n’ụlọ ahịa maka na ị na-achọ ịghọta ihe na-eme ma ọ bụ ihe ha na-ere.
Know ma ihe mechara mee. Otu onye na-ere ahịa bịakwutere gị wee jụọ gị ma ị̀ na-achọ ihe. Nzaghachi gị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akpaka,
“Ana m achọ.”
M na-akpọ na a Anya.
Onye na - ebido itinye aka na azụmaahịa gị mana ọ maghị ma ị nwere ihe ịzụrụ na - achọ.
Ma ha na-ele anya n’ihi na ha achọpụtabeghị ihe ọ bụ na ha chọrọ ma ọ bụ ihe ha chọrọ. Ọ bụ ọrụ ụlọ ahịa idobe ihe niile n'ụzọ ị nwere ike ịchọpụta n'onwe gị, n'ihi na ị nwere ike ịgaghị eso onye na-ere ahịa n'oge a.
A Anya nwere mmasị na mbụ echiche. Ihe na-emetụ mmụọ nke ukwuu ma na-ahụ ụzọ nke ọma n'oge a. Nke a bụ ihe kpatara ụlọ ahịa ji etinye ihe ndina, ihe ndọba abalị, na arịa ụlọ - ka ị nwee ike iche n'echiche n'ụlọ gị.
Ha adịghị atụkọta akwa ndị ahụ n’elu mgbidi wee mee ka ịgabiga ha.
Gị onwe gị kwa, ga-enyere gị aka Anya jiri anya nke uche hụ ndụ ha mgbe i jiri ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Onye na-ere ahia nke na - etinye aka ngwa ngwa - yana n'ike - na ọkwa a agaghị abụ ndị ahịa na - eto eto. Ha ga-achụ ha ọsọ.
Mana nke ka mkpa, belụsọ na ha nwere ike iji anya ha soro ihe na - apụ n’ụlọ ahịa ahụ, ha ga - apụ n’oge adịghị anya. Oge ha bara uru ma ọ gwụla ma ihe dị na ụlọ ahịa a na-emetụta, ha ga-aga n'ihu.
Otu esi esonye onye na-ele anya: “Ndụ Ka Mma”
Oku oku ime ihe ka anyi mara nke oma na ntaneti TV. N'ihi na o yighị ka ị ga-esi n'ihe ndina gị bilie ma zụta ihe ozugbo, ọtụtụ ụdị ndị na-ewu ewu na-anwa ime ka obi dị gị mma maka ịzụrụ ngwaahịa ha - mgbe ị mechara rute ya.
Chee echiche banyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahịa biya ọ bụla ị hụtụrụla. Ga-enwe mmekọahụ, nwee ọtụtụ ndị enyi, baa ọgaranya…. ị nwetara echiche ahụ.
Chọpụta, ndụ ka mma na-edozi nsogbu, ọ bụghị naanị nke ị chọpụtala.
Usoro ahia ebe a bu ichota ngwa ahia dika imeputa ndu ka nma - ihe obula nke ahu putara onye ahia gi zuru oke. Yabụ, ọkpụkpọ oku a na-elekwasị anya na gị chere chọrọ, ihe ịchọrọ, mana ekwughi okwu ma ọ bụ chee echiche. Ọ na-arụ ọrụ na ọkwa nke mmụọ.
The Anya na-eme ihe kacha mma ndụ ka mma ịkpọ oku ime ihe maka na ha chọrọ ihe ị n’egosi - n’agbanyeghi na ha echeghi na ha choro ya tupu ha ezute gị. Ọ bụ ụzọ dị oke mkpa iji nyere atụmanya gị aka ịmata mkpa ha - ọbụlagodi na anaghị ekwu okwu.
Echela na ọkpụkpọ oku a bara uru na mgbasa ozi TV. Ọ dịkwa oke egwu n'ịzụ ahịa ahịa.
Ọ bụrụ na atụmanya gị amataghị ozugbo ma ọ bụ kwenye na ha nwere mkpa ị na-agwa okwu, ị ga-egosi otu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ga-esi mee ka ndụ ka mma.
Dabere n’otú ị ga-esi kwenye n’olileanya gị na ị ga-eweta ndụ ahụ ka mma, ị nwere ike nwee Nweta Ndụ Na-enweghị Nchegbu or Enwekwu ego na-emefu ego kpọọ-edinam. Nke a bụ onye na-azụ ahịa ahịa nke biya biya.
Triggerzụta ihe na-akpalite ebe a na-azaghachi gị ndụ ka mma kpọọ-edinam. Site n'ịza ajụjụ ahụ, ha weliri aka ha elu ma gosi na ha chọrọ n'ezie ihe ị na-enye. N'ezie, ha amaghị etu esi arụ ọrụ ma ọ bụ ego ole ọ na-efu; ị ka ga-enweta ikike imechi ọrịre ahụ, mana ugbu a, ị nọ n'ụzọ ziri ezi.
Ihe omumu: Kwesịrị ịcha ọhụụ ahụ na Anya na a nkọwa nke otú i nwere ike gbanwee ndụ ha.
Na-eme nchọgharị na alllọ Ahịa nke alllọ Ahịa
Ugbu a were ya na ị na-achọ ụlọ ahịa ọhụụ ọhụrụ a, ihe adabara gị anya.
Realize ghọtara na ọ bụ ihe ịchọrọ ma ọ bụ chọọ. Nke a ga-abụ isi mgbe ị nwere ike bulie ihe n’elu shelf, na-enyocha ya.
N'oge a ị na-atụnyere ma na-ekwu ọdịiche. I lee anya n’ego, ị na-ele mkpado ma na-elekwa ihe dị na ya.
Ugbu a ị bụ a Shopper, n'ezie etinye aka na njikere ime mkpebi banyere ma nke a bụ ihe dị gị mkpa.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na tupu oge a, ị nwere ike ị gaghị enwe mmasị na mkparịta ụka gị na onye na-ere ahịa. Ghaghi inwe mmasị na njirimara nke ngwaahịa a.
Storelọ ahịa ahụ nwere ike ịmalite ịmalite Ndị na-eme ihe nkiri site n’ime ka ọ dị mfe itinye mkpa gị na uru nke ngwaahịa ha. Mee ka ọ dị mfe ọgụgụ, mfe ịchọta.
Nke kachasị mma, nye ngwaọrụ na ọrụ ahaziri iche na ahaziri iche nke jikọrọ mkpa nke atụmanya gị na uru ị na-enye. Ka ị na-ahaziri, nke ka mma.
Iso Onye Nzụkọ Ihe Na-emekọrịta Ihe: “Mezie ya”
Tupu atụmanya dị njikere ịzụta, ha na-achọkarị idozi nsogbu ha - nke nwere ike ịgba ha ume ịzụta.
The dozie ya ịkpọ oku ime ihe bu ihe emere ime ka nsogbu nke olile anya gi puo.
Mgbasa ngwa ngwa nwere nnukwu dozie ya Kpọọ-na-edinam na ibe obibi ha.
Ha choputara nsogbu a: i nweghị okporo ụzọ zuru ezu.
Chọrọ idozi ya? Wee debanye aha.
The dozie ya ịkpọ oku ime ihe nwere ike ibute ọrịre, mana ọtụtụ mgbe ọ na-ebute ya ụzọ.
Ga-ahụ ọtụtụ azụmaahịa site na iji a dozie ya kpọọ-na-edinam fọrọ nke nta ozugbo. Nke ahụ dị mma ma ọ bụrụ na nsogbu ị na-achọ idozi doro anya nke na ọ chọrọ iwebata.
Mana maka ọtụtụ ndị nwere azụmaahịa, nsogbu a nwere ike ghara ịma ihe. Ọtụtụ oge olile anya anyị na-enwe ihe mgbu, mana amaghị ebe mgbu ahụ si abịa. Ọ bụrụ na ịchọta onwe gị ịkọwa ya na atụmanya gị, ị nwere ike ịmali na dozie ya kpọọ-na-eme ọsọ ọsọ.
The Shopper maara ihe bụ nsogbu ya ma chọọ ka edozi ya. Asụsụ ọ bụla nke ga-agba ya ume idozi nsogbu ahụ tozuru oke.
Ọ bụ oku iji rụọ ọrụ siri ike ma nwee ike iji ya chọpụta ụdị atụmanya ị nwere yana otu kachasị mma iji nyere ha aka.
Mgbe mgbe, dozie ya oku na-aga ime-ihe na-abịa n’ìgwè na atụmanya ịhọrọ nke dabara na mkpa ha. N'ebe a, usoro ịre ahịa ahịa bụ ịhazi atụmanya site na ngalaba dị mkpa ka ị wee nwee ike ịkọwa ha na ụzọ nke ezigbo azịza.
Triggerzụta ihe na-akpalite ebe a na-emekọrịta ihe na gị dozie ya kpọọ-edinam. Site na ịpị ya, atụmanya gị weliri aka ha wee gosi, ee, ha nwere n'ezie ihe mgbu ị na-akọwa ma chọọ ụzọ ka ọ laa. Ugbu a, ọ bụ oge ịtụle otu ị ga-esi mee nke ahụ.
Ihe Ọmụmụ nke: Ikwesiri iweta ihe a uru nke ngwa ahia gi ma obu oru gi n'uzo kwesiri nke gi Shopper - naanị ihe ndị dị n'oge a, mana n'oge na-adịghị anya.
Chọrọ enyemaka na mkparịta ụka ahịa nke kwesịrị ịgbaso dozie ya ịkpọ-ime-ime? Budata Akwụkwọ Ego Ahịa High-tiketi a n'efu ma jupụta oghere iji mechie azụmahịa ndị ọzọ dị elu:
Budata akwukwo ahia di elu
Isi na ndekọ ego nkịtị
Ọ bụrụ na mkpebi ahụ dị mma, atụmanya gị ga-abụrịrị ịbụ onye na-azụ ahịa ahịa ma bụrụ onye asịwo.
Onye na-azụ ihe bụ onye dị njikere ịzụta.
Nke a bụ ebe mkpọsa na-ekewa ndị mmeri na ndị emeriri. Kedu ka ị na-eche na ụlọ ahịa mgbe ị dị njikere ịzụta mana ị nweghị ike ịchọta ndekọ ego? Ma ọ bụ nke ka njọ, ịchọta ya, ma ọ nweghị onye nọ ebe ahụ ga-enyere gị aka?
You nwetụla mgbe ị kwụsịrị ịga ahịa n’ihi na ị nweghị ike ịzụta ihe ị chọrọ?
Ndị na-ere ahịa na-eme ka o doo anya ịchọta ndekọ ego na-eme nke ọma. Ma ọ bụ n’ebe doro anya ma ọ bụ na onye na-ere ahịa ga - esonyere gị ga - akpọrọ gị ebe ahụ n'onwe gị.
Ihe ọ bụla ọzọ bụ ọdịda nke ahụmịhe. Gaghị enwe ike ịre ndị ahịa ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịzụta n'aka gị.
Nke a nwere ike ịpụta ma ọ bụrụ na ị nwere saịtị ecommerce. Mana oge ụfọdụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị chọrọ ntakịrị ihe iji mechie azụmahịa ahụ.
Ọ bụrụ otú ahụ, “ezobela ego”. Gbaa mbọ hụ na atụmanya gị mara etu ị ga - esi bụrụ onye ahịa.
Iso Onye Zụrụ Ihe Na-emekọrịta Ihe: “Zụta Ugbu A”
Kpọọ ma ọ bụ oku na-aga n'ihu bụ nke na-atụ anya atụmanya ịpịa obere akpa ha: zụta ugbu a!
Ị nwere ike ịhụ zụta ugbu a edepụtara ụzọ dị iche iche na mpaghara ngwaahịa dị iche iche. Na katalọgụ e-commerce, oku na-aga ime ihe nwere ike ibu ụzọ kwuo "Tinye na ụgbọ ibu." Mana n'ụzọ bụ isi, anyị na-arịọ atụmanya ịzụta ihe ha na-agbakwunye na ụgbọ ala ha.
Ọzọ oge, zụta ugbu a enwere ike ịkọwa ya maka ngwaahịa ịchọrọ ịzụrụ. Dị ka Bụrụ Onye Otu ma ọ bụ Wulite Atụmatụ M. Typedị okwu a dị mkpa karịa na ọ dabara adaba na ọnọdụ ahụ ma nwee ike ibuli nzaghachi site na ịhazi aha arịrịọ ahụ.
Mgbe ụfọdụ, zụta ugbu a anaghị etinye ego, kama ọ chọrọ atụmanya ịmalite ngwaahịa a n'efu. Mgbanwe a dị n'etiti ụdị azụmaahịa "freemium", ngwaahịa nwere oge nnwale n'efu, ma ọ bụ nkwa ịkwụ ụgwọ ego.
N’okwu ndị a niile, ndị zụta ugbu a a na-akpọ oku ime ihe na atụmanya dị njikere ime.
Dabere na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, nke a nwere ike iwe obere oge iji zụlite. N'ihe banyere e-commerce, mgbe mgbe, onye ọrụ nwere ike ịga Loiterer na asịwo ngwa ngwa, so an tinye na ụgbọ ibu na Cartzụta ụgbọ ezi uche.
Mana oge ụfọdụ, ịkwesịrị ịkwalite ntụkwasị obi site na olile anya gị na a zụta ugbu a ịkpọ oku ime ihe na mmekorita nke izizi dị oke, n'oge adịghị anya.
Kama, wulite a ahia azum na-ewulite ntụkwasị obi mbụ, na mgbe ahụ pounce na zụta ugbu a ịkpọ oku ime ihe mgbe olile anya ahụ egosila na ha agafeela usoro ịzụ ahịa niile.
Triggerzụta ihe na-ebute ebe a bụ ihe kachasị nke ihe niile ịzụta; na ịpị zụta ugbu a bọtịnụ N'ezie, dị ka ị maara, ọrụ gị arụbeghị. Ikwesiri inwe usoro azụmaahịa dị ọcha, nke siri ike, na-ejikwa ọjụjụ ọ bụla ikpeazụ, ma mezuo n'ụzọ ga-eme ka ọ dịrị gị mfe iso gị na-azụ ahịa.
Ọtụtụ azụmahịa emebiwo site na akara ngosi “ogologo ahịrị dị na ndenye ọpụpụ” - ọbụlagodi mgbe ịnweghị ụlọ ahịa anụ ahụ.
Ihe Ọmụmụ nke: Ikwesiri ikowa esi transact azụmahịa ya na nke gi asịwo; doo anya banyere otu esi azụta ngwaahịa gị ma rụọ ọrụ nke ọma.
Na-agwakọta 4 niile Oku na-Action ka Dchọpụta yingzụta Ihe
Ekwesiri iji oku ọ bụla mee ihe na ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị. Anyị na-ewulite ntụkwasị obi na ntụkwasị obi - nwayọ - na nkwukọrịta ọ bụla ma ọ bụ ọdịnaya. Ikwesiri imeghari ọdịnaya na ọkpụkpọ oku na-arụ ọrụ.
Ọ dị njọ ka ịnwe oku na-aga ngwa ngwa ka ọ bụrụ ikwe ka atụmanya gị laghachi azụ.
Emela ka onye zụrụ gị zụta wee sorozie ya Mụtakwuo kpọọ-edinam.
Usoro a nke na-aga site Loiterer site Anya, na- Shopper, na- asịwo bụ nke m kpọrọ mbugharị. Ọ bụ ikike nke atụmanya ịhọrọ ịmekọrịta azụmahịa na ọkwa dị omimi ma dị omimi ruo mgbe ha họọrọ ịghọ onye ahịa.
N’echiche ụfọdụ, ị naghị eto ndị ahịa - ha na - emepe onwe ha. Naanị ihe ị ga - eme bụ inye ha ihe ha chọrọ - kpọm kwem mgbe ọ bụla ha chọrọ ya - chọpụtakwa mgbaàmà nke ọpụpụ - ihe ndị na - azụta ya na - oge ha mere.
Ka ị na-amụta iji nke ọ bụla akpọrọ 4 rụọ ọrụ na ndị na-ege ntị ziri ezi, ị ga-ahụ na ị na-eduzi atụmanya gị site na usoro ahịa ahụ nke ọma na ntụkwasị obi kachasị.
Tags: tinye na ụgbọ ibuzụta ugbu aomume ahiakpọọ ka emeiheanachoe-azụmahịaecommerceloitereronye nlerelookersngwa ahịa n'ịntanetịonline erengwa puoshopperzụọ ahịa ka onye ahịa